Olee otú Jiri okwu na Mgbe mmetụta
Ikekwe, ihe kasị ngwá ọrụ dị ike na gị Mgbe mmetụta ngwá, okwu ka i nwee ike nweta gị mmetụta site amị ụkpụrụ maka parameters karịa nwere ike mgbe ahụ ike jikọrọ ndị ọzọ. Bụ isi atụmatụ nke okwu bụ na ha belata mkpa maka ọtụtụ narị aka set keyframes maka na-aga aga na nke ọ bụla ngagharị animated ha na-eme ọrụ a ukwuu quicker usoro.
1. Inye ngosipụta ka a oke
Na-egosi isi ojiji nke okwu, m kere ọhụrụ mejupụtara ma dọba 2 siri ike n'ígwé na ya. Na ala na otu onye bụ nwa, nke abụọ na otu onye bụ acha anụnụ anụnụ.
Ọ bụrụ na m ugbu a na ha opacity nke-acha anụnụ anụnụ oyi akwa efu ná mmalite nke usoro iheomume, i nwere ike dị ịhụ nwa oyi akwa n'okpuru.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ndị opacity nke-acha anụnụ anụnụ oyi akwa ka nwayọọ nwayọọ na-amụba, anyị nwere ike, na nke ugbu a, na-eji keyframes mfe n'etiti abụọ ihe iji nweta ya, Otú ọ dị anyị nwere ike tinye ngosipụta n'ebe a iji gosi otú ha na-arụ ọrụ.
Ahọpụta ndị họọrọ oke na mgbe ahụ ma na-aga site Animation> Tinye Expression ma ọ bụ shortcut ịgbachi Alt (ma ọ bụ nhọrọ maka Mac) ebe na ịpị elekere nkwụsị emepe a ederede igbe. M na-eji opacity, na ederede igbe m pịnye oge * 7.
Ihe nke a na-eme bụ iji timeframe uru na sekọnd, ba uba ya site 7 na-esetịpụrụ ndị opacity maka-acha anụnụ anụnụ oyi akwa na na. Ya mere, site Ọ dịghị ọ adahade ruo mgbe ọ esịmde ya karịa nke 100. Ee, nke a bụ nnọọ mfe ngosipụta ma ụkpụrụ a bụ otú okwu na-arụ ọrụ, na ọ dị mfe ịghọta echiche ndị a dị iche iche nke ihe atụ.
E nwere ihe ụfọdụ iji mara banyere a oke ozugbo ị enịm ngosipụta na ya. Firstly, ị ga-achọpụta uru na-egosipụta na-acha uhie uhie. A na-egosi na ọ na-na-na-achịkwa ihe okwu na-apụghị gbanwere aka.
Ị ga na-mara na e nwere ụfọdụ mmezi buttons n'akụkụ nke okwu labeelu. Onye mbụ bụ na ihe = ịrịba ama, nke a bụ bọtịnụ gbanyụọ okwu nwa oge na-enweghị ihichapụ ya, dị ka ị nwalee ma ọ bụ na-arụ ọrụ site a usoro maka ihe atụ. Nke abụọ bụ a eserese button na-enyere ụkpụrụ nke okwu na-plotted n'ime eserese ele.
Dị ka ị ga-atụ anya n'aka usoro ahụ ji, eserese na-egosi na opacity ebili na oge maka-acha anụnụ anụnụ oyi akwa.
Nke atọ button bụ ghota ụtarị button na-enyere anyị na ike dị mfe okwu n'ụzọ dị mfe. Dọlite ​​ghota ụtarị site na otu oke ọzọ na-emepụta a ndụ njikọ n'etiti abụọ na-eme ka uru nke ugbu a oke si uru nke ọzọ. N'ihi na a mfe njikọ na-bụ nnọọ ngwa ngwa ụzọ nke ọbọ ya.
A ezi ihe nlereanya nke a bụ ma ọ bụrụ na m na-emeghe ngosipụta maka adiana, na ịdọrọ ya ghota ụtarị jidesie anyị opacity oke nke ka na setịpụrụ na-amụba na oge.
M shrank-acha anụnụ anụnụ oyi akwa a obere otú i nwere ike ịhụ utịp ke etiti ebe a.
Gịnị mere mgbe ị na-egwu nke a ugbu a, bụ na Ọ bụghị nanị na opacity abawanye dị ka iso, oyi akwa nwekwara-agbagharị ya.
Ka ị pụrụ ịhụ, ikike jikọọ dị iche iche parameters nwere ike nnọọ mgbagwoju mmekọrịta na-enweta nnọọ ngwa ngwa na-adị mfe.
Dọlite ​​ghota ụtarị n'ụzọ dị otú a nwere ike ịmepụta otu di iche iche nke mmekọrịta gafee dị iche iche n'ígwé, n'ihu ịgbasa ohere.
Ọ bụ uru na-ekwu na ihe ghota ụtarị ke na mkpa bụ akpaaka kee okwu n'ihi na a nyere njikọ maka gị, ị pụrụ ime otu ihe ahụ aka ma ọ bụrụ na ị na-ọma ọfiọkde okwu, na ọ dị mkpa icheta ị nwere ike idezi ederede kere site ghota ụtarị gbanwee mmetụta bụrụ na ị chọrọ.
Ikpeazụ button bụ asụsụ nchịkọta akụkọ, nke-enye gị iji họrọ okwu ghọtara site Mgbe mmetụta si dị iche iche nhọrọ kama na iji kọmputa ede ha si ebe nchekwa. Ahọpụta otu ebe ya n'ime okwu ederede mmanya.
E nwere ụfọdụ teminoloji mkpa ka ị na-grips mgbe arụ ọrụ na okwu, otu n'ime ndị isi ndị na-Vektọ na arrays. Iji gosi na nke a m kwukwara ọhụrụ ederede oyi akwa nwere okwu Expression n'elu nke anyị ẹdude oru ngo. Ọ bụrụ na anyị na-eji ụtarị ijikọ ọnọdụ na opacity parameters, ị ga-ahụ uru na okwu bụ
temp = transform.opacity;
Rịba ama na ọ na-emepụta abụọ ụkpụrụ, nke a bụ n'ihi ọ bụ ezie na opacity nwere otu uru, ọnọdụ chọrọ abụọ (3 ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị a 3D oyi akwa nke N'ezie) ụkpụrụ na-arụ ọrụ, ndị x na y ụkpụrụ.
The okwu na-ebu abụọ ma ọ bụ karịa ụkpụrụ na-akpọ Vektọ ma ọ bụ arrays. Ha dị nnọọ nkịtị na Mgbe mmetụta, ihe niile si arịlịka ihe, ọnọdụ n'ọtụtụ na-agụnye ihe karịrị otu uru.
Biko mara, ọ bụ ezie na ọtụtụ akwụkwọ yiri na-eji okwu na nka weba na, a vector comprises naanị nọmba, ebe otu n'usoro na-agụnye okwu ma ọ bụ ndị ọzọ ederede akpọkwa dị ka mma.
Site gụnyere a ọnụ ọgụgụ na brackets mgbe ọ bụla uru (dị ka arịlịka mgbe , arịlịka mgbe  na na, mgbe nile na-amalite na 0 nke mbụ otu) na otu n'usoro, ị nwere ike na-ezo aka ha ozugbo ma wepụ nanị na uru, nke a a maara dị ka indexing. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ka y uru nke a ọnọdụ, ị ga-eji Position  (nke abụọ uru) na nke a ga-alaghachi na y axis uru n'oge ahụ na-ekwu.
3. Ịmụba on Igosipụta
Ka anyị pụrụ ịhụ, ihe nwere ike ngwa ngwa nnọọ mgbagwoju na okwu, ọ bụ ezie na ha na-eme na-enye a miri emi akara usoro maka mgbagwoju anya animations na otú pụta, ya mere, ọ bụ ma eleghị anya ga-atụ anya.
Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ozi ọma, ọtụtụ ndị na-eme ọtụtụ ojiji nke ikike nke okwu na-enweghị ọ bụla n'ụzọ zuru ezu na-grips na asụsụ. Nke a bụ n'ihi na e nwere a plethora nke okwu ọba akwụkwọ na internet ebe ị pụrụ ịchọta ma detuo okwu fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla ị pụrụ iche n'echiche, niile maka free.
Ugbu a, ụfọdụ ga-asị na nke a bụ a shortcut na adịghị aka ogologo okwu, kama m na-ekwekọrịtaghị na nke a, na ebe a bụ ihe mere. N'ihi na ị pụrụ ịhụ okwu nakwa dị ka ihe ọ na-eme, na-eji ndị ọzọ okwu bụ a kediegwu ụzọ ịghọta otú ihe na-enweta, ị nwere ike gbanwee ha na-amụta otú ha na-eme ihe ha na-eme, ọ bụ oké ụzọ bụghị nanị na-enweta ụfọdụ oké mmetụta ngwa ngwa, ma ịmụta otú recreate yiri mmetụta onwe gị site ọkọ.
Ụfọdụ ndị nwere ike nanị iji okwu ọbá akwụkwọ na mgbe anya ihe ọ bụla ọzọ, ma m na-eche na n'ihi na ndị na-eji ha dị ka ngwá ọrụ maka ịmụta ihe, ha bụ ndị a kediegwu akụ na n'ụzọ zuru okè na mụbaa gị okwu ihe ọmụma.
Olee otú Mee ihe Animated Logo na Mgbe mmetụta
Olee otú Mee AVI Files Nta
Nweta Best tost Alternative na OS X Mavericks
Olee otú Play AVI on Nexus 10
Olee otú Download Movieclips Video na a Click
Olee otú dezie AVCHD Files
Olee otú dezie TS Files
Olee otú iji tọghata na Ọkụ HD Video ka DVD (Windows 10 gụnyere)
> Resource> Video> Olee otú Jiri okwu na Mgbe mmetụta